Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na South Africa » Nzaghachi South Africa maka mmachibido njem ọhụrụ etinyere
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Safety • Akụkọ kacha ọhụrụ na South Africa • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Nzaghachi South Africa maka mmachi njem
Nke a na-esote nchọpụta nke Omicron ọhụrụ variant.
South Africa kwadoro onwe ya na ọnọdụ World Health Organisation na mmachibido njem njem ọhụrụ.
Òtù Ahụ Ike Ụwa arịọla ndị isi ụwa ka ha ghara itinye aka na mmeghachi omume ikpere ma dọọ aka ná ntị megide mmachibido iwu njem.
Dr. Michael Ryan (Onye isi nke ihe mberede nke WHO) kwusiri ike na ọ dị mkpa ichere ịhụ ihe data ga-egosi.
"Anyị ahụla n'oge gara aga, nkeji enwere ụdị okwu ọ bụla nke ụdị mgbanwe ọ bụla na onye ọ bụla na-emechi oke ma na-egbochi njem. Ọ dị mkpa n'ezie na anyị ga-emeghe ma na-elekwasị anya," Ryan kwuru.
Achọpụtara na achọpụtala ụdịdị ọhụrụ na mba ndị ọzọ. Nke ọ bụla n'ime ikpe ndị ahụ enwebeghị njikọ na nso nso a na South Africa. Ọ dị mma ịmara na mmeghachi omume mba ndị ahụ dị nnọọ iche na ikpe na South Africa.
Mgbochi mmachi njem ọhụrụ a yiri ịta South Africa ahụhụ maka usoro mkpụrụ ndụ ihe nketa ya dị elu yana ikike ịchọpụta ụdị dị iche iche ngwa ngwa. Ekwesịrị ịja sayensị mara mma ma ghara ịta ya ahụhụ. Obodo zuru ụwa ọnụ chọrọ nkwado na mmekorita na njikwa nke ọrịa COVID-19.
Ngwakọta nke ikike South Africa iji nwalee yana mmemme ịgba ọgwụ mgbochi na-akwalite, nke ndị otu sayensị ụwa na-akwado, kwesịrị inye ndị mmekọ ụwa niile nkasi obi anyị na-eme yana ha na-ejikwa ọrịa a. South Africa na-agbaso ma na-amanye ụkpụrụ ahụike COVID-19 zuru ụwa ọnụ na njem. Ọ nweghị onye butere ọrịa agaghị ahapụ obodo ahụ.
Minista Naledi Pandor kwuru, sị: "Ọ bụ ezie na anyị na-asọpụrụ ikike nke mba niile ịme ihe ndị dị mkpa iji chebe ụmụ amaala ha, anyị kwesịrị icheta na ọrịa a chọrọ nkwado na ikesa nka. Nchegbu anyị ozugbo bụ mmebi mmachi ndị a na-akpatara ezinụlọ, ụlọ ọrụ njem na njem nlegharị anya na azụmahịa. "
South Africa amalitela itinye aka na mba ndị nyere iwu mmachibido njem na echiche ime ka ha chegharịa.